Tantara - Anglikana Antananarivo - MG
Sahan'asa sy Herivelona
Ny taona 1855 no nisian’ny solontena voalohany avy amin’ny fiangonana anglikana nandalo teto Madagasikara dia ny Mgr Vincent W. RYAN, Evekan’i Maorisy, izay niara-dia tamin’ireo iraky ny fanjakana Anglisy hihaona tamin’ny Mpanjaka RADAMA II. Tamin’io fihaonana io no nangatahan’ny Mpanjaka ny handefasana misionera avy amin’ny fiangonana anglikana ho aty Madagasikara. Ka ny volana Aogositra 1864 no tonga tao Toamasina ny Rev William HEY sy Rev J. HOLDING izay misionera avy tamin’ny “Society for the Propagation of the Gospel to foreign parts” na ny (S.P.G).
Ny 2 Febroary 1874 kosa no nanamasinana ny Rev Robert K. KESTELL-CORNISH ho Eveka voalohan’i Madagasikara. Rehefa nitombo ny isan’ny mpino ka tsy antonona intsony ny trano fiangonana niorina teo Ambatomasina (misy ny Etat Major Andohalo ankehitriny), dia tapaka fa hanangana trano fivavahana lehibe kokoa. Ka ny 13 Septambra 1883 no nametrahana ny vato fehizoro teo Ambohimanoro izay nataon’ny Praiminisitra RAINILAIARIVONY. Naharitra enin-taona ny asa fanorenana teo ambany fanaraha-mason’ny mpanao mari-trano Norveziana Alfred ANKER, ary araka ny sary nataon’ny Injeniera Anglisy William WHITE. Ny 10 Aogositra 1889, festan’i Santa Laurent no nitokanana ny Katedraly, ka itondrany io anarana io. Tonga nanatrika izany ny Praiministra RAINILAIHARIVONY izay nisolo tena ny Mpanjaka tamin’izany. Nifandimby nitondra ny Diosesin’i Madagasikara taorian’ny Mgr Robert K. KESTELL-CORNISH ireto Eveka manaraka ireto, dia ny:
Ny 12 Janoary 1969 kosa dia nozaraina ho diosesy telo ny Diosesin’i Madagasikara dia ny Diosesin’Antananarivo izay notantanin’ny Mgr Jean MARCEL, ny Diosesin’Antsiranana izay notantanin’ny Mgr Gabriel JOSOA ary ny Diosesin’i Toamasina izay notantanin’ny Mgr James SETH.
Rehefa nisotro ronono ny Mgr Jean MARCEL ny taona 1974 dia voafidy ho eveka handimby azy ny Mgr Ephraim S. RANDRIANOVONA, izay nohamasinina ny taona 1975.
Nandimby azy taorian’izay kosa ny Mgr Remi J. RABENIRINA, izay nohamasinina ny 13 Mai 1984. Marihina fa voafidy ho Arsevekan’ny Ranomasimbe Indiana izy ny taona 1995.
Nandimby azy ny Mgr Samoela Jaona RANARIVELO, nohamasinina ny 29 Jona 2008, ary mitondra ny Diosesin’Antananarivo ankehitriny.